Olee otú dọwara fim weebụsaịtị na ala
> Resource> Video> Olee dọwara Movies si weebụsaịtị
Chọta ọtụtụ fim na weebụsaịtị na ị chọrọ dọwara ịzọpụta na kọmputa ma ọ bụ na na na obere ngwaọrụ? Ma Ọ pụrụ ịbụ na gị na ndakpọ olileanya na ripping fim weebụsaịtị bụ bụghị ihe dị mfe ime. Bụ nke a mere anyị nwere ike ikwu a dị ike omume here- Wondershare AllMyTube (AllMyTube for Mac). Ọ na-enye gị ikike dọwara fim fọrọ nke nta niile na-ewu ewu weebụsaịtị. Nwere ike kwere ya? Ị kwesịrị ị na-enye ya a ogbugba.
Download ma wụnye ihe omume na kọmputa gị. Mgbe ahụ na-agba ọsọ ka ọ ga-esi njikere na-amalite ripping ọrụ. Lezienụ anya ka họrọ a nri version maka kọmputa gị. Anyị ga-akọwa otú dọwara nkiri n'okpuru site na iji windows version dị ka ihe atụ.
1 Ịnweta fim ị na-amasị na weebụsaịtị
Ẹkedori otu n'ime atọ isi nchọgharị-ntụgharị, Firefox na Chrome. Chọta a nkiri na weebụsaịtị ka hulu.com na pịa ya na-egwu.
2 Rip fim na ụzọ abụọ
Mgbe nkiri na-akpọ, chọta a Download bọtịnụ na n'elu nri. Pịa bọtịnụ na-nkiri dọwara.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta nkiri na-egwu mgbe ị dọwara ya, ị pụrụ mbụ idetuo URL nkiri na ahụ na-aga ka usoro ihe omume na-pịa Paste URL bọtịnụ. Ihe ị chọrọ ime mgbe ahụ bụ na-eche ma ọ bụ chọọ n'ihi na ihe nkiri dọwara.
Cheta na: Nke a nkiri Ripper nwere ike dọwara 5-10 fim n'otu oge.
3 Play nkiri na kọmputa ma ọ bụ obere ngwaọrụ
Mgbe ihe nkiri na-dọwara, ị nwere ike ịchọta ya na ebudatara n'ọbá akwụkwọ. Abụọ-pịa ya na-egwu na kọmputa gị.
Ma ihe ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu on a obere ngwaọrụ dị ka iPad? Ọ bụ dị mfe dị ka achịcha n'ihi na nke a usoro. Rịba ama a tọghata bọtịnụ na nri nke nkiri item? Pịa na ya ma họrọ iPad dị ka mmepụta usoro. Pịa OK na ihe niile na-eme.
N'ezie, i nwere ike tọghata ndị ọzọ nkịtị formats dị ka AVI, MOV na ndị ọzọ.
Nke ahụ bụ ihe niile n'ihi ripping fim weebụsaịtị. Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? E wezụga ripping na converting, a usoro nwere ihe ọrụ. O nwere ike ịbụ a nkiri ọkpụkpọ na-akwado niile nkịtị formats. I nwekwara ike mbubata na fim na kọmputa gị ka usoro ihe omume, nke nwere ike inyere jikwaa ha na a mma. Chọrọ agbalị ya ugbu a? Dị nnọọ aga n'ihu ma na ị pụrụ ịhụ ihe ịtụnanya.
Watch Hot Movies 2013 Online maka Free